वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि ‘शुभयात्रा’ एप्स, के छन् यसमा फिचर ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि ‘शुभयात्रा’ एप्स, के छन् यसमा फिचर ?
असार ४ गते, २०७५ - २१:४४
अर्थ डबली, प्रवास
काठमाडौँ, ४ असार (रासस) ः वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि लक्ष्य गरी ‘शुभयात्रा’ मोबाइल एप्स निर्माण गरिएको छ । सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार बनाउनका लागि युकेएड, आइएलओ, द एशिया फाउन्डेशन र पिएनसिसिआई नामक गैरसरकारी संस्थाको संयोजनमा उक्त एप्स बनाइएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा भएको बढ्दो समस्या न्यूनीकरण गर्न उक्त एप्स बनाइएको पिएनसिसिआईका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताए । मोबाइल एप्सलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लगिने बताइएको छ ।
एप्समा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जान लागेका नेपाली कामदार, विदेशमा भएका नेपाली कामदार र स्वदेश फर्किएकाका लागि उपयोगी सामग्री समावेश गरिएको छ ।
असार ४ गते, २०७५ - २१:४४ मा प्रकाशित
लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा
आज फेरि सुनको मुल्य घट्यो, तोलाको कति छ ? थाहा पाउनुहोस्
नेपाल लाइफको ‘घातक रोग सुविधा योजना’ सार्वजनिक, ५० लाखसम्मको जोखीम वहन हुने
शेयर बजार ह्वात्तै घट्यो, कति अङ्कले घट्यो ?
कोरियन भाषाको परीक्षा शूल्क ‘आइएमई पे’ मार्फत भुक्तान गर्न सकिने
सेञ्चुरी बैंकको लाभांश, शेयर भन्दा नगद बढी